Vakoti veKanzuru yeHarare Vonyozera paBasa Vachiti Zvichemo Zvavo Zvitange Zvagadziriswe
Kubvumbi 28, 2020
FILE - A medical staff member wears protective equipment while closing a window at the Wilkins Infectious Diseases Hospital in Harare, March 11, 2020.
Vakoti vanoshanda muzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuru yeguta reHarare vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupihwa nemushandirwi wavo pavanoshanda vakaisa hupenyu hwavo patambo vachirwisana nechirwere cheCovid-19.
Vamwe vakoti vanoshanda paWilkins nepaBeatrice Road Infectious Diseases Hospital, apo panozivikanwa nekunzi paNazareth, vati vaswera vachidziya mushana zvavo vasiri kuita basa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupihwa pakushanda kwavari kuita vakaisa hupenyu hwavo patambo kana kuti risk allowance.
Mutungamiri wesangano revakoti vanoshanda vari pasi pemakanzuru, reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, VaSimbarashe James Tafirenyika, vaudza Studio7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakirinika pamwe nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuru yeHarare zvikurusei paWilkins nepaNazareth.
VaTafirenyika vati vakoti vari pasi pekanzuru yeHarare havanawo zvakare hanzu dzekuzvidzivirira pavanenge vachirwisana nechirwere che coronavirus vakati mari yavari kupihwa nekanzuru inoita zana rimwe chete remadhora pazuva ari maRTGS haina zvainovabatsira nazvo.
Vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rinoona nezvehutano, VaObediah Moyo, kana kanzuru yeHarare ikaramba yakaisa zvitanda munzeve.
Mumwe mugari wemumusha weMbare uyo uri pedyo nechipatara cheNazareth, Amai Idah Sakarombe, vati vane mwana ari pachipatara ichi asiri kunzwa zvakanaka nekudaro vave kutyira hupenyu hwemwana wavo zvichitevera kunyozera kwave kuitwa nevakoti vekanzuru.
Mukuru anoona nezvehutano mukanzuru yeHarare, VaProsper Chonzi, vati vanga vari mumusangano wekuzeya nyaya iyoyi vakati tigozovabata zvakare asi patatenda pamhepo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Asi mutauriri wekanzuru, VaMichael Chideme, vati sangano riri kutaura rakamirira vakoti ava harina kunyoreswa nekanzuru yavo nokudaro havakwanisi kutaura pamusoro paro.
Zvichakadai, bazi rezvehutano rinoti pari zvino pane vanhu zviuru zvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana vaongororwa chirwere cheCovid19 uye pavanhu ava pave nevanhu vana vafa nechirwere ichi.